Ngubani owafaka ii-Candy Canes?
Imbali emfutshane yee-Candy Canes
Iminyaka engama-350 yeMbali i-Candy Treaty
Phantse wonke umntu ophilayo ekhula eyaziwa nge-candy ebomvu nebomhlophe obomvu ngesiphelo esivengekileyo esibizwa ngokuba ngumsila, kodwa bambalwa abantu abaqaphela ukuba luphi ixesha elide lolo luhlobo olukhoyo. Yikholwa okanye akunjalo, imvelaphi yenkomo ye candy empeleni ibuyela emva kweminyaka engama-350 ukuya kwixesha apho abenzi be-candy, bobabini abaqeqeshiweyo kunye nabadlali abanomdla, besenza i-sugar tisser stick as a favorite confection.
Kwakusekuqaleni kwekhulu le-17 ukuba amaKristu aseYurophu aqale ukusebenzisa imithi yeKrismesi njengenxalenye yokubhiyozela iKrismesi .
Imithi yayihlala ihlotshiswe ngokusebenzisa ukutya ezifana ne-cookies kunye namaxesha angama-candies. I-original candy tree candy yayiyintonga eqondileyo kwaye imhlophe imbala.
I-Candy Stick iba yiCream Candle
Ingxelo yokuqala yembali kwi-shape eyaziwayo yombumba nakuba ibuyele emva kwe-1670. I-choirmaster e-Cologne Cathedral eJamani yaqala ukubopha i-sugar-stick in the shape of canes ukumela abasebenzi beelusi. Zonke iibhonasi ze-candy ezimhlophe zanikwa ke abantwana ngexesha leenkonzo eziza kudala.
Isithethe sabefundisi sokuhambisa ii-candy canes ngeenkonzo zeKrisimesi ekugqibeleni zaza kwasasazeka kwiYurophu kwaye kamva eMelika. Ngelo xesha, iinqanawa zazingamhlophe, kodwa ngamanye amaxesha abenzi be-candy babeza kwandisa i-sugar-roses ukuze bahlobise iinqununu. Ngomnyaka we-1847, inkcazo yokuqala yembali kwimiba ye-candy eMelika yabonakala xa ummi waseJamani ogama lakhe linguAugust Imgard wakhenkethi umthi weKrisimesi kwindawo yakhe yaseWoster, eOhio kunye namagqabi e-candy.
Ikhefu lePipi lifumana iziqhamo zalo
Phantse kwiminyaka engamashumi amahlanu emva koko, kubonakala iimboyi zokuqala zeebhanki ezibomvu kunye ezimhlophe. Akukho mntu owaziyo ukuba ngubani owenzile imivimbo, kodwa ngokusekelwe kumakhadi eKrismesi, siyazi ukuba akukho masikidi enamehlo abonakalayo ngaphambi komnyaka we-1900. Imizekeliso yemigodi ye-candy emigqabha ayizange iboniswe kude kube sekuqaleni kwekhulu lama-20.
Malunga nelo xesha, abenzi be-candy baqala ukongeza i-peppermint kunye ne-wintergreen flavour kwii-cany zabo kunye namagqabi azo ngokukhawuleza aza kwamkelwa njengeenqweno zendalo.
Ngomnyaka we-1919, umkhandi we-candymaker ogama linguBob McCormack waqala ukwenza i-candy canes. Kwaye phakathi kwekhulu leminyaka, inkampani yakhe, uBob's Candies, yaba yinto eyaziwayo ngokubanzi ngamagqabi azo. Ekuqaleni, iinqanawa kwakufuneka ziboshwe ngesandla ukuze zenze i "J". Oku kwatshintshwa ngoncedo lomkhwenyana wakhe, uGregory Keller, owasungula umatshini ukuba azenzele ukuveliswa kwemveliso yerhasi.
Iimpawu zeCandy kunye neNtsomi
Kukho ezinye iimbali kunye neenkolelo zonqulo ezithandana nekoty. Uninzi lwawo lubonisa umjelo we-candy njengophawu oluyimfihlelo lobuKristu ngethuba apho amaKristu ayehlala phantsi kweemeko ezicinezelayo.
Kuye kwafunwa ukuba umjeka wawunjenge "J" ngokuba "nguYesu" kwaye imivimbo ebomvu neyemhlophe imela igazi likaKristu kunye nococeko. Kwakhona kuthiwa imivimbo emithathu ebomvu yayifanekisela uZiqu zintathu kwaye ubunzima be-candy bamele isiseko seCawa kwidwala eliqinileyo. Ngokubhekisele kwi-peyermint ye-candy ye-candy, yayimela ukusetyenziswa kwehisophi, isityalo esichazwe kwiTestamente Elidala.
Nangona kunjalo, akukho bungqina bembali obukhoyo obuxhasa ezo mabango, nangona abanye beza kubafumana bevuya ukucinga. Njengoko kuphawuliwe kwangaphambili, ii-candy canes azizange zize zide nge-17 leminyaka, ezenza ezinye zezi zibango zingenakwenzeka.
Imbali emfutshane yeSithuthuthu
Isingeniso kwiProjekthi yeManhattan
Imbali yeMidlalo yamanzi
Imbali ye Windsurfing
Imbali yePepsi Cola
Imbali yeJet Ski
Izakhiwo kunye neeprojekthi zikaRichard Rogers Partnership
Iyintoni Ingcaciso yeMpawu eziBumbeneyo?
Iintsuku Ezilishumi elinambini zeKrismesi ziqala nini?
I-RFD yoLwazi lokuSasazwa koLwazi
I-Piano eNew Pros & Cons
Iingcebiso zokuQala iBusiness Craft
10 Amazwi ngePirate "Black Bart" uRoberts
Iimpawu kunye neenkcukacha malunga nePikaia yokuqala
Ukuxothwa kwiKholeji? Iingcebiso zesikhalazo soMntu
Iingxaki zeZibhalo zeMathematika zamahhala kwiWebhs-Graders
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngecawa YeCawa?
10 Abaxhamli abaye babulala abantu
Iingcamango zokukhethwa kweeNgcebiso kubafundi
Iimpawu eziqhelekileyo zaseMntla Amerika